I-BIM-Ihlabathi endandingaliphupha kwiminyaka engama-20 eyadlulayo- iGeofumadas
NgoFebruwari, 2016 Okufumaneka, Zobunjineli, Microstation-Bentley, egeomates My
Kwiminyaka engama-20 kamva, ndingadibanisa kuphela i-BIM njengendaleko eyayibonisa ngelo xesha, ndishiya ibhodi yokuzoba kunye nokulandela iphepha kwiifayile zeCAD. Yayiyindaleko emangalisayo, xa ucinga ukuba wayevela ekubeni ngumdrafti we-chinographer kunye ne-calculator ye-notebook + ye-calculator + i-Lotus 123. Kubonakala kumangalisa kum ukukholelwa ukuba akusafuneki ukubeka irabha yombane kunye nokakayi kwiphepha lokulandela ngaphambi kokuyila ngokutsha, kungasasetyenziswanga izicwangciso ezininzi zolo tshintsho, okanye ulahle iikopi ze-sepia zentsusa, ezazisetyenziselwa kuphela ukumakisha ngombhalo obomvu wezicwangciso ezakhiweyo okanye umgca wetafile yomakhi oyintloko.
Ndimele ndivume ukuba bendihlala ndingumntu othanda itekhnoloji, bendikhe ndasebenzisa i-8086 nge-orenji yescreen se-orenji ngemihla ye-DOS ekrwada Ngokuchukumisayo, yayifudukile isenza amakhadi eendleko zeyunithi kwiLotus 123 ukuya kwi-SAICIC 3 ukulungiselela uhlahlo-lwabiwo mali kunye noqikelelo, kwaye yayihambile kwimatriki ye-SAICIC yexesha elifanelekileyo ukuya kwiProjekthi yeMicrosoft 4 ukulawula ixesha, nangona kuludwe lwalusebenzisa inkqubo kwiFoxBase kwi MBINI. Hayi kuba kwakungekho ngaphezulu, kodwa ukuqhekeza i-EaglePoint kunye ne-SAICIC 4 ngezo ntsuku kwakunzima.
Yonke into yatshintsha, xa ndangena ezandleni zam i-AutoCAD, ngelo xesha i-R13, ine-Gateway 2000 PC, i-133 Mhz Pentium I kunye ne-hard disk eyi-250 MB. Ngokuqinisekileyo, lawo yayingamaxesha apho ndandinokuzivalela kuyo kuphela iofisi enesiphatho-moya-yi khompyutha; kungekhona kum-, kwaye uphume ekushiseni kwemini emini nge sweta ye-ocher ukuze uthenge isidlo sasemini i-Chocolate Crunch kunye neCoke.
Fuck i-triglycerides ebaluleke kakhulu.
I-BIM yeyam namhlanje ebonakalisa into engenakwenzeka xa yayindim kuphela itekhnoloji ethandekayo yokwenza umatshinikunye noko ndiza kuba nako-.
Ukuba nje besine-AECOsim, uyilo lwangaphambili belungayi kufuna ukwenza imizobo yamanzi yoMyili uRamiro Bonilla, apho endleleni ibinomtsalane kodwa ingenakuphikiswa, koloyilo lweSakhiwo esiyiNtloko seBhanki yoMkhosi oxhobileyo waseHonduras; bekuya kwenziwa kube kanye kwi-CAD, ukwenza iibhlokhi ezahlukeneyo zeendleko ezixabisa kakhulu ukuvisisana nomxholo «ngqondweni»NguNjineli uRoberto López Carballo. Emva kokuvunywa kwayo, ngewayengasokolanga kangangeentsuku ukufumana imvume yesakhiwo sokwakha, ngokubandezeleka okungagungqiyo kukaRudy noRubén -namhlanje abakhi beenhlonipho- ingakumbi kuba kwaoko oomatshini kuphuhliswa kwafuneka enze ukubiya nomonde wezakhiwo Boris Viscovich kwakunye nencasa okukruqulayo ngenxa counterweights kakubi, ayikhankanyi kunye kwizikhewu ofanelekileyo kwendlu ukuze yokupakisha 2.50 ububanzi.
Nge-BIM, uyilo lusekelwe kwimimandla esebenzayo, njengabacwangcisi abakwenzayo kwi-AECOsim, kwiimpawu eziqhotyoshelwe kwi-template I-imodeli, ukwenzela ukuba injineli yesakhiwo idlala kuphela ngobukhulu, isebenze i-DGN efanayo kwi-Bentley STAAD; ngaphandle kokulandelwa okungapheliyo kweNjineli uRivera, kunye namaxwebhu ayo aphrintiweyo aqhubekayo efuna ixesha eliphezulu lokugqithisa.
I-BIM ivumela ukuphuculwa kwenkqubo yokujonga imeko yomoya ukuba yenziwe ngaxeshanye, kunye nolawulo lokuphazanyiswa kwangaphambili, okwenza umahluko phakathi kwesinyithi sentsimbi kunye nebhedi yekhonkrithi, kwimeko apho kufanelekileyo ukwenza umngxunya kwindawo ye-inflection, kwikota yobude okanye ukuba ikhadi alivumi. Ngesele silisindisile ilizwe, emva kokuba isiseko senziwe ngokutsha emva kweemeko ezinomswakama ezifumaneka kwindawo yeelifti, iimitha ezi-5 ezantsi kwigumbi elingaphantsi, oko kwakuthetha ukuphinda ucinge ngodonga lwekhethini kunye nokuhlengahlengiswa kwesiseko sesilayidi. Ukudibanisa i-BentleyRAM kwisihlomelo sensimbi eyakhiweyo, i-GEOPAK yolwakhiwo-mhlaba kunye nezinto ezivelisayo zoyilo olugobileyo lweholo bekuya kuba yinto entle… kwaye konke kwifayile ye-DGN eyondliwe kumgangatho we-IFC kwi ProjectWise, akukhathazeki ukuba iofisi yam i-Torres Valladolid de Comayaguela kwaye ngaloo ntsasa ndifanele ndilwe kwiCandelo leklasi yeThala leencwadi ngexesha lokufa kweyunivesithi ebusuku.
Kodwa i-BIM iya ngaphaya kokumisela uyilo, ikwabandakanya ukulingiswa kwenkqubo yokwakha.Ndikhumbula ukuba kubiza malini isigqibo semikhosi yala maxesha ukukhetha uhlobo lwezixhobo zokugqibezela, umfuziselo kwicebo lendalo awupheli; ongathethiyo malunga nokuhlaziywa kweerhafu ezifileyo emva kokuba bagqibe endaweni yokuhambisa i-confectionery ukuya kwi-marble kwinqanaba lesixhenxe. Ukufaka imodeli ye-BIM, yenzelwe ukusebenzisa izinto zobomi bokwenyani, nokuba kungokuhlaziya okanye i-AECOsim, kuya kufuneka utsho ukuba lolu ludonga, loo nto ayinamsebenzi, kodwa ukuba ichaziwe kuthiwa ibhlokhi yekhonkrithi, eya kuthi I-0.75 cm isamente enkulu, kunye nodaka lwe-1: 4, ipolish yekalika kunye nepeyinti esekwe emanzini. Nazi iindaba ezimnandi, ngekhe ndenze ukubala, emva kokubala ukuqikelela iindleko, kuba ukusebenzisa iplagi ye-Naviswork, ndinokuba nohlahlo-lwabiwo mali ngendlela eguqukayo ngaphandle kotshintsho lwe-idiotic yeencasa ezimbi zeekholoni.
Nje ukuba uyilo lugqityiwe, kuya kufuneka uvelise izicwangciso zomgangatho, amacandelo, ii-facade, ngaphandle kokwenza ngendlela yakudala, kubandakanya nembono yokujonga, ukongeza ukudityaniswa kwemifanekiso enomdla ngoku engazukuhlala iiyure zengxoxo kwikomkhulu le I-Instituto de Previsión Militar, nebhodi entsha yabaphathi eyayiphethe eyokwazi kwakhona zonke iinkcukacha zeprojekthi. Imigangatho ye-IFC ngoku ivumela ukutshintshiselana nokuba ndisebenzisa i-AECOsim (eyayisakuba yiBentley Architecture) kwaye basebenzisa i-AutoDesk Revit + Naviswork (ngoku ebandakanya ubungakanani obenziweyo). Ke, ukulawula inkqubela phambili yemisebenzi ayifuni ukuya kwiincwadana zeNjineli uCarlos Rosales, ezingadibaniyo neeakhawunti zikaNjineli uMarisela, kaFantasy uCowboy Palma, okanye oonobumba beNjineli uJessica Ortiz. Ingandigcina ixesha lokuqikelela, utshintshe iiodolo kunye nolawulo lwenkqubela phambili kwi-MsProject.
Oh, yaye ke, BIM igcina mna apho kuya kuthetha ukuba emva kwamehlo ngononophelo injineli Rosario, umlinganiselo yaye kubhalwe kwincwadi yakhe zonke iinkcukacha ukuchaza izicelo amabhastile ezizodwa Honduras, guardrails fax ubhedu inkampani Torogoz e El Salvador, okanye umyalelo weempawu isibhakabhaka ezayo evela Miami kwaye akukho mntu waziyo apho isikhongozeli kulahlekileyo Customs Puerto Cortes.
Ukuba ucinga ukuba ukwenziwa nge-software ye-CAD yeyona nto ilungileyo, kuya kufuneka ubuyisele ukujonga kwakho kwi-BIM, kuba kuya ngaphaya koko besikade sikubiza ngokuba yi-AEC (Ubunjineli, ubuNjineli kunye noKwakha), i-AECO ibhekisa kumjikelo wobomi boMsebenzi, bonke ubomi besakhiwo ukuba okwangoku, iminyaka engama-20 kamva, abonwa njengeprojekthi yobunjineli kodwa njengeprojekthi yoqoqosho -njengoko kwakunjalo-.
La Umgca wexesha leBIM Kukude, kodwa ukuba unako ukunqoba nantoni na ixesha, jonga Hlaziya y AECOsim. Inkuthazo endibangela yona iyafana neminyaka engama-20 eyadlulayo, isigqibo sokuba loluphi uphawu oza kulukhetha lushiyelwe kukuthanda kwakho.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iiveki ezi-2 zokusebenzisana kwemephu yaseLatin American
Post Next Imodeli yoLawulo lweNdawo yoMhlaba-Kwimeko yaseColombiaOkulandelayo »